IBirch Breeze-iGeorgian Bay Waterfront Cottage
Le yindlu yokulala enye eselunxwemeni, eyakhiwe ngeminyaka yoo-'60s inezinto ezininzi ezinomtsalane. Ilungele ukuqubha (apha kunye/okanye kufutshane), ukukhwela inqanawa, ukujonga iinkwenkwezi, ukubukela iintaka, okanye ukuzipholela nje kwidekhi(s)/unxweme/ipatio/ngakwindawo yomlilo.
Kufuphi kakhulu kukhetho lokuhamba olukumgangatho wehlabathi (kubandakanya ukufikelela kwi-Bruce Trail), kunye neePaki zeSizwe nezePhondo kwicala laseHuron kunye neGeorgian Bay (kubandakanywa neGrotto).
Iinketho ezimbini kumgama omfutshane wokuqhuba wokutya/iivenkile/zokutyela-intloko yeLion kunye neTobermory.
Igumbi elikhulu ligumbi lokuhlala, lokutyela kunye nekhitshi (nangona ikhitshi lingekabikho) - kukho nefoya ekhokelela kwigumbi lokuhlambela, igumbi elinye lokulala, kunye negumbi elinye elangeni (elingekafakwa).
Amanzi akumgama ambalwa kwaye amaza aya kukulalisa ebusuku. Iimbono zihlala zimangalisa.
Idekhi, ipatio yamatye, unxweme olunamatye, indawo yomlilo, kunye neyadi encinci (efanele ukubanjiswa, i-badminton, i-cornhole xa ifikile) iyafumaneka nakwiindwendwe.
Le ndlu ikwiPeninsula yaseBruce, kwicala laseGeorgia Bay, malunga nesiqingatha phakathi kweTobermory kunye neNtloko yeNgonyama. Imizuzu nje embalwa emantla kwilali (hamlet?) Dyers Bay, Ontario.
Uya kwazi ukuba ufikile xa ubona indlu ende engwevu ngasekunene, encanyathiselwe kwindlwana engwevu ephantsi ngasekhohlo. Ibhokisi yeposi emhlophe, inokuba yiTesla ebomvu ngaphambili.
I-Tobermory imalunga nemizuzu engama-40 kude kunye neLion's Head malunga nemizuzu engama-30, kwaye kulapho kufuneka uye khona ukutya, iivenkile kunye neeresityu, i-LCBO, izinto zabakhenkethi (iingcebiso kwincwadi yethu yesikhokelo). Ukufikelela kwiBruce Trail malunga nemizuzu emi-2 yokuqhuba/umzuzu we-15 ukuhamba.
I'm addicted to travelling to new places and experiencing new things with good friends. Hi-brow or lo-brow, trashy or classy - life has too much to offer to sit around at home!
Omnye okanye abaninzi bethu banakho okanye bangabikho kwindlu elandelayo ukuba uyasifuna, kodwa ngokubanzi siza kubambelela kwindlu kunye kufuphi kwaye sihlale ngaphandle kweenwele zakho, kwaye sifumaneke ukuba uyasifuna.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Miller Lake